» निदाएको समयमा चित्रकला कोर्ने व्यक्ति !
निदाएको समयमा चित्रकला कोर्ने व्यक्ति !
२० श्रावण २०७६, सोमबार ०७:५२
धेरै मानिसको बानी हुन्छ, निद्रामा हिँड्ने वा निद्रामै बोल्ने । तर एकजना यस्ता पनि छन् जो निद्रामा कलात्मक तस्बिर बनाउँछन् । उनको नाम हो ली हैडविन । उनी बेलायतस्थित कार्डिफ सहरमा बस्छन् । ली हैडविन जम्मा चार वर्षका थिए, त्यसै बेलादेखि उनले घरको भित्तामा चित्र कोर्न सुरु गरेका थिए ।
तपार्इं भन्नु होला, कुन बच्चाले यो उमेरमा घरको भित्तामा चित्र बनाउँदैन ? तर बाँकी बच्चा र लीमा फरक छ । त्यो फरक हो, ली निदाएको बेलामा ‘ड्रइङ’ गर्थे । जसैजसै उनी ठूलो हुँदै गए, निदाएरै चित्र बनाउने उनको कलात्मक क्षमतामा पनि सुधार हुँदै गयो ।
जब उनी १५ वर्षका थिए, हैडविनले हलिउड अभिनेत्री मर्लिन मुनरोका तीनवटा ‘पोट्रेट’ बनाएका थिए । तर आज उनलाई त्यसका बारेमा अलिकति पनि सम्झना छैन । आश्चर्यको कुरो त के भने, निदाएका बखत राम्रो चित्र बनाउने ली ननिदाएको बेला चित्र बनाउन सक्दैनन् ।
लीको यस अचम्म पार्ने कलाका विषयमा कार्डिफ विश्वविद्यालयकी पेनी लुइसले अनुसन्धान गरेकी छन् । उनको भनाई छ, “निदाएका बेला चित्र बनाउनु, उनको आधा सुतेको र आधा जागेको मस्तिष्ककै कारण हो ।” पेनी लुइसका अनुसार, मानिस निद्रामा कोल्टे फर्किन्छन् । बोल्छन् या हिँड्छन् । यो सबै हाम्रो दिमागमा भएको उथलपुथलकै परिणाम हो । यो सामान्य घटना हो । तर, ली हैडविनको सन्दर्भ योभन्दा पनि अगाडि बढको देखिन्छ । उनी पेन्सिल, ब्रस, यहाँसम्म कि हड्डीबाट पनि चित्र बनाउँछन् । यो सामान्य हुन्थ्यो होला, उनले ब्युँझिएको समयमा यस्तो कलाकारिता गर्ने थिए !
पेनी लुइस भन्छिन्, “लीको दिमागको बनावट र काम गर्ने तरिका, दुबै नै एकदम पेँचिलो छ ।”उनी यसबारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेकी छन् । उनी भन्छिन्, “जब हामी सुतेका हुन्छौँ, त्यसबखत हाम्रो मस्तिष्क पनि सुतेको हुन्छ भनेर हामी मानिरहेका हुन्छौँ । तर हाम्रो मस्तिष्कको एउटा हिस्सा त्यसबेला पनि सक्रिय हुन्छ ।”
त्यो सक्रिय मस्तिष्कले ब्युँझिएका बेला गरिएको कामको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ । नयाँ कुरा र कला सिक्दछ । सम्झना पनि गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो मस्तिष्कसँग यति काम हुन्छ कि उसलाई सुत्ने फूर्सद पनि हुँदैन ।
ली हैडविन यसलाई संयोग मान्दछन । उनका अनुसार निदाएको समयमा उनको दिमागमा कुनै कला प्रदर्शनीको विचार आउँछ । जसको अलग–अलग भाग हुन्छ । प्रायः उनी यिनै भागहरूका हिसाब अनुसार चित्रकला कोर्छन् ।
पेनी लुइस भन्छिन्– निदाएका बेला हाम्रो मस्तिष्कको तर्क गर्ने हिस्सा निदाउँछ । तर दिमागको त्यो हिस्सा, जसले भाव महसुस गर्दछ र त्यसलाई नियन्त्रित गर्दछ– त्यो ब्युँझिएको हुन्छ । यसलाई लिम्बिक ब्रेन भनिन्छ, जुन निदाएको बेलामा पनि ब्युँझिएको हुन्छ ।
पेनी लुइसका अनुसार, ली हैडविनको दिमागमा जे भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ, त्यसको सम्बन्ध मानिसको प्राकृतिक विकासको प्रकृयासँग जोडिएको छ । आदि मानव जतिखेर जंगलमा थिए, त्यसबेला सुतेको बेलामा पनि तीनीहरूले चनाखो भएर बस्नु पर्दथ्यो । यसकारण कि कुनै खतरा नआओस् । आए पनि त्यसबाट तत्काल बच्ने उपाय निकाल्न सकियोस् । ली हैडविन आफ्नो यस बानीका कारण बेलाबेलामा दिक्दार पनि हुन्छन् । रातको समयमा अचानक ब्युँझिदा पसिना–पसिना हुन्छन् । डराउँछन् पनि ।
पेनी लुइस भन्छिन्, निदाएका मानिस हत्या, बलात्कार अनि चोरीजस्तो कुकृत्य पनि गर्छन् । तर हैडविन निदाएको बेलामा चित्र बनाउँछन् । यो त राम्रो कुरा हो कि आफ्नो मस्तिष्कको उलटफेरका कारण उनी अपराधको बाटोमा लागेनन् । उनले कलाको प्रदर्शनी सुरु गरे ।
पेनीको भनाई अनुसार ननिदाएको समयमा ली हैडविनलाई आफ्नो कलाकारिताको क्षमताका बारेमा सम्झना रहँदैन । यसै कारण पनि उनी आफ्नो दिमागको यो कला क्षमतालाई मान्न तयार छैनन् । यदि यो मस्तिष्कको बाधा हट्ने हो भने सायद उनले ननिदाएरै राम्रा–राम्रा चित्र बनाउन सक्नेछन् ।